Xidhiidhka FA Oo Soo Saaray Go'aamo Aanay Jeclaysan Arsenal & Chelsea Oo Ku Saabsan Finalka FA Cup - Gool24.Net
Xidhiidhka FA Oo Soo Saaray Go’aamo Aanay Jeclaysan Arsenal & Chelsea Oo Ku Saabsan Finalka FA Cup
Xidhiidhka kubadda cagta Ingiriiska ee FA ayaa soo saaray go’aamo la xidhiidha ciyaarta Sabtida ay ku ballansan yihiin Arsenal iyo Chelsea ee finalka Koobka FA Cup, taas oo ka dhici doonta garoonka qaranka ee Wembley.
Xidhiidhku waxa uu shaaciyey in isbeddel lagu samaynayo qaabkii kooxaha loo guddoonsiin jiray koobka isla markaana meesha laga saarayo xafladdii lagu qaban jiray garoonka dhexdiisa iyo dabbaal-deggii weynaa ee sida gaarka aloo qurxin jiray.
Kooxda ku guuleysta koobka ayaa iska xaadirin jirtay qaybta Royal Box oo lagu guddoonsiin jiray koobka waxaanay halkaas ku samayn jireen dabbaal-deg iyo fantasiyo ay ku muujiyaan hanashada koobka ugu faca weyn Ingiriiska.
Laakiin xidhiidhku waxa kaliya oo uu koobka gacanta ka gelin doonaa kooxda ku guuleysata, mana jiri doonto xafladdii iyo dabbaal-deggii weynaa ee garoonka dhexdiisa, waxaana marka ay koobka guddoomaan ay ciyaartoyda oo kalidood ahi garoonka dhexdiisa ku muujin doonaan farxaddooda, iyadoo ay ka maqan tahay xafladdii quruxda badanayd.
Arrintan ayuu FA-gu sheegay inay uga dan leeyihiin inay ku yareeyaan khatarta Fayraska Korona ee mar kale dunida dib uga bilaabay inuu faafo.
Dhinaca kale, inta aanay ciyaartu bilaabmin ayaa waxa shaashadaha laga baahin doonaa muuqaallo lagu soo bandhigayo taageerada loo hayo dadka xanuunnada dhimirka qaba, kuwaas oo uu sannadkan si weyn u garab taagnaa Amiirka Boqortooyada Britain ee Prince William.
Si kastaba, Chelsea oo soo garaacday Manchester United wareeggii semi-finalka iyo Arsenal oo soo karbaashtay Manchester City isla wareeggaas ayaa waxay Sabtida wada ciyaari doonaan finalka FA Cup, waxaana markii ugu horreysay ciyaar koob ah iskaga hor imanaya labada tababare ee Frank Lampard iyo Mikel Arteta oo ay tahay mid walba markiisii u horreysay ee uu final tago, maadaama ay sannadkan oo kaliya tababareyaal u yihiin labadan kooxood.